यसकारण युवावर्गमा उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दो छ, जान्नुहोस यसको लक्षण र उपचार - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»यसकारण युवावर्गमा उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दो छ, जान्नुहोस यसको लक्षण र उपचार
यसकारण युवावर्गमा उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दो छ, जान्नुहोस यसको लक्षण र उपचार
By मनिषा थापा on २३ बैशाख २०७५, आईतवार ११:३६ स्वास्थ्य/जीवनशैली
पिएनपिखबर, भक्तपुर : आजभोलि युवावर्गमा पनि उच्च रक्तचाप र अन्य हृदय रोगको शिकार भएको पाइन्छ। तर केहि सुझाबमा ध्यान दिने हो भने यस समस्याको समाधान पनि हुनसक्छ।
युवक युवतिहरु घरमा पाकेको भन्दा पनि बाहिरकै खाजा खान रुचाउछन। तर उनीहरुको रोजाईमा पर्ने यो फास्ट फुडको अधिक सेवनले कालान्तरमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। यस्तोमा युवा र युवतीहरु त्यस्तै बाल-बालिकालाई सम्झाउन प्रयास गर्नुपर्छ कि लगातार जंक फूड्स खानुको कारण उनीहरुमा मोटोपना लगायत मुटु सम्बन्धित समस्या देखापर्दछ। एक शोधको अनुसार मोटोपन हृदय सम्बन्धी रोगको एक प्रमुख कारण हो।
ट्रान्स फ्याट्सको नकारात्मक प्रभाव :
१. बाजारमा उपलब्ध धेरै जस्तो जंक फूड्समा सामान्य देखि अधिक मात्रामा ट्रान्स फ्याट्सको एक विशेष प्रकारको फ्याट हुन्छ। फ्याट हृदयको नलिहरुमा जम्मा भईरहेको छ। बोसो उमेर बढ्नु संगै हृदयको नलीमा पनि रक्त प्रवाहलाई प्राभाव पार्न थाल्छ। यो अबस्था कालान्तरमा हृदय रोगको कारण बन्दछ।
२. केवल फास्ट फूड्स युवा वर्गमा बढ्दो मुटु रोगको कारण हैन।
३ युवक-युवतिहरु शारीरिक श्रमबाट अब डराउछन । १०० देखि२०० मीटर मात्र हिड्नुपर्दा पनि साधनको सहारा लिन्छन। खेलकूद र व्यायाम प्रति रुची कम हुदै गएको छ।
४. युवा वर्ग आजकल ज्यादा समय ल्यापटप र फोनमा बिताउँछन। यसकारण उनीहरुमा मोटोपनाको साथ्-साथै जीवनशैली संबंधित समस्याहरु जस्तै (डाइबिटीज, हाई ब्लडप्रेशर आदि) बढी रहेको छ।
आजभोलि युवाहरु आफ्नो करियरलाई लिएर काफी तनावग्रस्त रहन्छन। युवकहरुलाई रोजगारी पनि मुस्किलले मिल्ने गर्छ। राम्रो रोजगार मिले पनि बोसद्वारा दिएको कार्य कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुराले तनाव पैदा गर्ने गर्छ। तनाव हृदयसँग संबंधित रोगको एक प्रमुख कारण हो।
हृदय सम्बन्धी रोगबाट बच्न सबैभन्दा पहिलो तरिका भनेको बाल्यअबस्था देखि नै खान-पानको राम्रो वानी बसाउनुपर्छ। जस्तै दूध र दूधसँग जोडिएको पदार्थ, फल-तरकारी र रसदार खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा व्यायाम गर्नुपर्दछ। तनावलाई सकेसम्म सकारात्मक सोच ल्याएर नियंत्रित गर्नुपर्दछ। यसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ।